Maamulihii cashuuraadka berriga ee gobolka Bari oo sheegay in lagu waayey kiiskii lagu eedeeyey-Dhegayso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maamulihii cashuuraadka berriga ee gobolka Bari oo sheegay in lagu waayey kiiskii lagu eedeeyey-Dhegayso
Maamulihii cashuuraadka berriga ee gobolka Bari oo sheegay in lagu waayey kiiskii lagu eedeeyey-Dhegayso
May 17, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Mahdi Muuse Cabdiraxmaan waxa uu ahaa maamulihii waaxda cashuuraadka berriga ee gobolka Bari, waxaana xilka laga qaaday bishii December 21, 2017, kadib markii lagu soo eedeeyey in musuq-maasuq ka fuliyey dekadda magaalada Bosaso.
Mahdi Muuse Cabdiraxmaan ayaa shir saxaafedeed uu ku qabtay magaalada Bosaso ku sheegay in dambiga lagu soo eedeeyey uusan waxba ka jirin, isla markaana ay cadeeyeen in aan dambi lahayn maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari iyo guddigii loo xil saaray in ay baaraan kiiska, kuwaasi oo ka koobnaa seddex sarkaal oo kala ah Gaashaanle dhexe Maxamad Faarax Axmad Jookar, Gaashaanle dhexe Yuusuf Axmad Ciise iyo Gaashaanle dhexe Axmad Maxamad Saciid.
Waxa uu intaasi ku daray Mahdi Muuse Cabdiraxmaan in maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari bishii April 26-2018 ay soo saartay go’aan, kaasi oo ahaa in aan dambi lahayn go’aankaasi oo ku saxiixnaa gudoomiyahe Abuukar Cabdinuur Aw-Jaamac oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari.
…Waxa ay ahayd inta aan xilka laga iga qaadin in la baaro kiiska lagu soo eedeeyey, haddi la igu helo iyo haddii kaleba in go’aan laga gaaro baaritaanka kadib, balse taasi ma aysan dhicin oo iyadoo aan baaritaan la sameyn ayaa xilkii la iga qaaday ayuu yiri Mahdi Muuse Cabdiraxmaan.
Ugu dambeyn Mahdi Muuse Cabdiraxmaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in cadaaladda lagu dhaqmo, lana ilaaliyo muwaadinka sumcaddiisa.
Hoos ka dhegayso shirka jaraa’id oo dhammeystiran.
Halkan ka akhriso go’aankii Maxkamaddago’aanka maxkamadda